Ukuvula umuzi – iAfrika
Luchaza ukuthini usiko lokuvula umuzi?
Kafushane nje, singasho sithi lolu usiko olusho ukufakwa komsamo (idlozi) kanye nokuqhutshwa kosiko lwesibongo emzini omusha welinye lamalunga omndeni eseliphume inxiwa lamisa umuzi.
Ngokosiko nenkolelo yesizwe samaNguni, umuzi usuke ungamile ngokuphelele uma ungenawo umsamo oxhumanisa abaphansi abaphila ngokomoya kanye nabasaphila enyameni. Inhloso enkulu yalolusiko kuba ukugunyaza lowo osemise umuzi ukuba akwazi ukuqhuba usiko lwesibongo noma lwasekhaya elidala akhuliswe ngalo, kwakhe esezimele kanye nase nzalweni yakhe. Lokhu kubala ukushisa impepho axhumane nabaphansi uma kukhona isimo esidinga lokho, amanye amasiko esingabala kuwo ukwenzela umntwana omdala imbeleko njalo njalo. Konke lokhu kwenzeka ngemumva kokufakwa komsamo okuwukuvulwa komuzi.
Okwenziwayo uma kuvulwa umuzi
Isigaba sokuqala kuba ukushisa impepho ekhaya elidala kukhulunywe nabaphansi. Okulapho baziswa khona ukuba indodana yalapho kulelokhaya isiphume inxiwa yandisa umuzi kanye nesibongo, kube sekucelwa ukuba bamukele ukufakwa kulelokhaya elisha, benxuse abaphashi ukuthi bbabe yidlozi elihle nakhona. Ekhaya elidala kumele kuchithwe igazi lenkunku emhlophe kanye nembuzi emhlophe inyongo yayo okuchelwa ngayo lowo muzi omusha oyovulwa.
Izinguquko esezitholakala kulolusiko
Sukunoshintsho ekwenzeni lolu siko. Abantu abaningi sebevamise ukulandela imigudu yalolusiko kumuzi omusha uma sebeyohlala kuwo, bashise impepho khona ayi ekhaya elikhulu, konke bakwenze khona okufaka nomcimbi wokuvula umuzi osekuyinto eyejwayelekile kakhulu.
Lowo osemise umuzi uye athole imvume yokukwazi ukuqhuba usiko njengenhloko yomuzi wakhe, ukwazi ukuxhumana nabaphansi nanoma ingasiphi isikhathi uma kunesidingo. Esingabala kuzo ukugula emndenini, ukucela ukuvikeleka uma kukhona uhambo olukhona, ukucela izinhlanhla kwabaphansi kanye nokunye. Konke lokhu ukwenza ngale kokubuyela ekhaya elikhulu.
1 thought on “Ukuvula umuzi”
Hello…ngicela ukwazi ukubaluleka kwe nkosana